Maamulka gobolka Banaadir oo amray in dadka ay xirtaan Af-xir ama Mask - Jowhar somali news leader
Home NEWS Maamulka gobolka Banaadir oo amray in dadka ay xirtaan Af-xir ama Mask
Maamulka gobolka Banaadir oo amray in dadka ay xirtaan Af-xir ama Mask
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Mdane Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) ayaa maanta waxaa uu amar ku bixiyey in bulshada caasimadda ay xirtaan Afsaarka (Face mask) si looga gaashaanto xanunka COVID19.
Kaddib kulan ay isugu yimaadeen maamulka Gobolka Banaadir oo u shir guddoominayay duqa caasimadda kana soo qeyb galeen Guddoomiye ku xigeenada Maamulka Gobolka Banaadir, Xoghayaha guud, guddoomiyeyasha degmooyinka, Saraakiisha Aminga iyo Agaasimayaal ka tirsan Waaxyaha Dowladda Hoose ee Xamar ayaa looga hadlay soo labo kacleynta cudurka safmarka ah ee COVID-19, kaasi oo dhibaato ba’an ku haya bulshadeena, waxaana uu maamulka soo saaray go’aamo lagu badbaadinayo bulshada ku nool caasimadda.
Go’aanada waxaa ka mid ah in meelkasta oo ganacsi ah oo lagu iibiyo waxyaabaha kala duwan ama ha noqoto goobaha lacagaha la isugu xawilo in qof aan wadan Afxirasho (face mask) aan loo ogolaan inay gudaha u galaan oo ay ka ganacsadaan.
Milkiilayaasha goobaha ganacsiga ayaa la faray inay dhaqan geliyaan awaamiirta ka soo baxday Maamulka gobolka ee ah in la qaato afxirashada (Face mask), si looga hortago cudurka COVID-19.
Waaxda Caafimaadka Dowladda Hoose ee Xamar iyo guddoomiyayaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa lagu wargeliyay inay la socdaan dhaqan gelinta amarada ka soo baxay Maamulka Gobolka ee la xiriirta ka hortagidda faafidda cudurka COVID-19, sida uu warbaahinta u xaqiijiyay Cabdullaahi Wiish Agaasimaha guud ee Warbaahinta Gobolka Banaadir.
Previous articleFormer French President Nicolas Sarkozy has been jailed for corruption
Next articleTruth or Fake: Why these videos have nothing to do with Mars Perseverance Rover